Ndị ọka iwu International Tax na Netherlands - Law & More
Estụ isi na Netherlands na-emetụta onye ọ bụla bi na Netherlands ma ọ bụ na-emekọrịta ihe. Ma Netherlands na European (EU) niile nwere usoro ụtụ isi dị mgbagwoju anya nke mebere iwu siri ike na nkwekọrịta mba ụwa. Dịka ọmụmaatụ, usoro ụtụ isi Dutch, maara ọtụtụ ụdị iwu na ụtụ isi dị iche iche, dịka ụtụ ego, ụtụ isi, ụtụ isi na ụtụ isi ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, usoro ndị ae kwuru na mbụ, usoro na nkwekọrịta nwere ike inwe mmetụta na sistemụ ụtụ Dutch.
Mba na mba ụtụ ụtụ ọrụ
Estụ isi na Netherlands na-emetụta onye ọ bụla bi na Netherlands ma ọ bụ na-emekọrịta ihe.
Ma Netherlands na European (EU) niile nwere usoro ụtụ isi dị mgbagwoju anya nke mebere iwu siri ike na nkwekọrịta mba ụwa. Dịka ọmụmaatụ, usoro ụtụ isi Dutch, maara ọtụtụ ụdị iwu na ụtụ isi dị iche iche, dịka ụtụ ego, ụtụ isi, ụtụ isi na ụtụ isi ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, usoro ndị ae kwuru na mbụ, usoro na nkwekọrịta nwere ike inwe mmetụta na sistemụ ụtụ Dutch.
Tupu ịmalite azụmahịa na Netherlands ọ bụla ọchụnta ego ga-adụ ọdụ na akụkụ ụtụ Dutch na ụtụ ụtụ isi Dutch. Ọ bụ nka iji ọfụma jiri ụtụ isi iji belata nrụgide nke ụtụ Dutch na opekata mpe.
Law & More Ndị na-atụ ụtụ isi na-enyere aka ịmalite usoro ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị iji nwee obi ụtọ na ụtụ isi Dutch. Netherlands na-enye nkwekọrịta ụtụ isi bara uru maka ụlọ ọrụ dị iche iche nwere ndị enyemaka na mba ọzọ. Dochie anya mmepụta ihe na mba ndị ọzọ nwere ike ibute uru ụtụ isi. Ationtụ ụtụ isi ugboro abụọ ga - amachi oke maka ọtụtụ nkwekọrịta ụtụ Netherlands abanyela na ya. Ọzọkwa Dutch ịkwụ ụgwọ mbubata ịkwụ ụgwọ ga-egbochi ọtụtụ ikpe.
Law & More, na nkwado ya na ndị ndụmọdụ ya ụtụ isi yana ya na ndị ahịa ya, leba anya na nhọrọ nke iwu ụtụ isi Dutch na EU nyere. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị na ndị ndụmọdụ ụtụ isi na ndị ọrụ ndekọ ego edebanyere aha na ndị Netherlands edebere na ikike ndị ọzọ ga-arụ ọrụ iji nye ndụmọdụ na ụzọ kachasị mma maka ndị ahịa Dutch na ndị mba ọzọ.